Wed, Sep 30, 2020 | 03:14:51 NST
दाग हटेपछि म विदेश जान पाउँछु ?
प्रश्न: मैले दुवई जान मेडिकल गरेको छु। मेडिकलमा छातीमा दाग देखिएको छ। यो चिसो र धुँवा धुलोका कारणले हो भनिएको छ। त्यो दाग तत्काल औषधी खाएर हटाउन सकिएला ? दाग हटेपछि म दुवई जान पाउँछु ? उता पुगेपछि फेरी यो समस्या देखियो भने के होला ? उत्तर: सुरेश पौडेल, केन्द्रीय प्रतिनिधि, नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी महासंघ – राजु जी यसलाई दाग भन्दा पनि प्लुरल थिकेनिङ भनिन्छ। फोक्सोमा पानी जम्ने समस्या हो। यसको तपाईंले आफै पनि उपचार गर्दा राम्रो हुन्छ। चिसोबाट बच्ने, सुख्खा खानेकुरा नखाने, झोल भएको खानेकुरा...
छातीमा दाग देखिएमा रोजगारीका लागि विदेश जान पाइन्छ कि पाइदैन ?
प्रश्न: म वैदेशिक रोजगारीमा जान चाहन्छु। मेरो छातीमा अझै पनि ट्युबरक्युलोसिसको दाग छ। मैले ‌औषधि पूरा गरी सकेको छु। म विदेश जान पाउँछु कि पाउँदिन होला ? उत्तर: कैलाश खड्का, अध्यक्ष, नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी महासंघ - एक्टिभ टिबीको दाग हो भने त्यसको लागि औषधि नै खानु पर्ने हुन्छ। यसको लागि डाक्टरसँग परामर्श लिनु होला। क्षयरोगकै दाग हो भने जान मिल्दैन। क्याल्सिफिकेसन हो भने चाहि केहि देशहरुमा जान पाइन्छ। कतार, युएई, मलेसिया नजाँदा नै राम्रो। उनीहरुले हल्का स्कार, स्पट देख्दा पनि मेडिकल अनफिट...
प्रश्न: मैले कतारमा इलेक्ट्रिसियनमा जानका लागी आवेदन दिएको थिए। तर भिसा आउदा लेवर लेखेको छ। मैले एजेन्टलाई भन्दा उहाँले कतारबाट लेवर भनेरनै भिसा आउछ तर कतार गएपछि इलेक्ट्रिसियनकै काम दिन्छ भन्नुहुन्छ। के यो साँचो हो ? उत्तर: सञ्जिव जी, एजेन्टले भनेको साचो होइन। लेवर लेखेर भिसा आएको हुदा तपाईंले लेवरको नै काम गर्नु पर्ने हुन्छ। तलको लिङ्कमा गएर तपाईंको भिसा सक्कली हो कि होइन चेक गर्न सक्नुहुनेछ। https://www.moi.gov.qa/VsaWeb/Actions?action=geteServiceVisaInfoInput&language=english ...
म्यानपावरलाई बुझाएको रकम कसरी फिर्ता हुन्छ ?
प्रश्नः मैले कतार जान अप्लाइ गरेको थिए। म्यानपावरले भिसा आयो भनेर मसँग आधा रकम लियो। तर म्यानपावरले मेरो अन्तिम श्रम स्वीकृति गरेको रहेनछ। र पछि म्यानपावरले मेरो भिसा रद्द भएको जानकारी गरायो। तर मैले तिरेको रकम भने फिर्ता दिन मानिरहेको छैन्। मैले कसरी रकम फिर्ता पाउन सक्छु ? उत्तरः सलमान जी, तपाईंले काठमाडौंको बुद्धनगरमा रहेको वैदेशिक रोजगार विभागको कार्यालयमा गएर उजुरी दिन सक्नुहुन्छ। म्यानपावरलाई पैसा दिएको रसिद भए तपाईंले सजिलैसित पैसा फिर्ता पाउनुहुनेछ।...
श्रम स्वीकृति थाहा पाउन एसएमएस गर्ने नम्बर कति हो ?
प्रश्न : पासपोर्ट नम्वर हालेर श्रम स्वीकृति (आफू काम गर्न जाने कम्पनी, काम र तलब) बारे थाहा पाउन कतिमा एसएमएस गर्नु पर्छ ? उत्तर : कपिल जी, त्यसको लागि तपाईंले आफ्नो मोवाईलको म्यासेज बक्समा अंग्रजी अक्षरको पिपी (PP) टाईप गरी एक स्पेश छोडेर पासपोर्ट नम्वर लेखि ३४००१ मा एसएमएस गर्नुहोला। तपाईंलाई वैदेशिक रोजगार बिभागबाट सम्पूर्ण जानकारी सहितको एसएमएस प्राप्त हुनेछ। सो जानकारी सहितको एसएमएस प्राप्त नभएमा तपाईंको श्रम स्वीकृति नलिइएको र तपाईं ठगीमा पर्दै हुनुहुन्छ भनेर थाहा पाउनु होला। थप जान...
वैदेशिक रोजगारीमा जानुअघि तालिम दिने संस्था कुन कुन हुन् ?
प्रश्न : मैले विदेश जाने सोच बनाएको छु । तर केहि सिप सिकेको छैन् । अनि, रोजगारीका लागि विदेश जान कहाँ सम्पर्क गर्न सकिन्छ ? उत्तर : विदेश जानुअघि सिप सिकेर मात्रै गए काम र कमाई राम्रो हुन्छ । सिप सिकाउने संस्थाका काठमाडौंका साथसाथै विभिन्न जिल्लाहरुमा पनि खुलेका छन्। त्यसैले सिप सिक्न त्यहाँ गएर सम्पर्क गर्नुहोला। ती संस्थाहरु यो लिङ्कमा गएर हेर्न सकिन्छ। http://fepb.gov.np/downloadfile/LOI%20Result_1452595536.pdf नि:शुल्क तालिमको लागि तपाईंले एफ-स्किल भन्ने संस्थामा सम्पर्क गर्न सक्नु हुन्छ।...
करार अवधि पूरा नभई नेपाल आउनुपर्यो भने क्षतिपूर्ति पाइन्छ ?
प्रश्न : मेरो साथी साउदी गएको दुई महिना भयो। तर कम्पनीले नेपाल फर्काउने कुरा गरिरहेको रहेछ। उहाँले म्यानपावरलाई ८५ हजार रुपैयाँ तिरेर साउदी जानुभएको हो। करार अवधि पूरा नभई नेपाल आउनुपर्यो भने क्षतिपूर्ति पाइन्छ ? उत्तर : एलएक्स जी, विदेशमा कम्पनी बन्द हुनु कामदारको दोष होइन। त्यसैले म्यानपावरविरुद्ध उजुरी गरेर क्षतिपूर्ति लिन सकिन्छ। अहिले तपाईंका साथी विदेशमा नै हुनुहुन्छ भने उहाँका आफन्तले पनि वैदेशिक रोजगार विभागमा उजुरी दिन सक्छन्। उहाँ नेपाल फर्किसक्नुभयो भने पनि उजुरी दिए फरक पर्दैन। काठ...
नि:शुल्क सिप सिकाउने संस्था कुन होला ?
प्रश्न : म सिप सिकेर वैदेशिक रोजगारीमा जान चाहन्छु । त्यसको लागि नि:शुल्क सिप सिकाउने संस्था भए जानकारी दिनुहुन अनुरोध छ । उत्तर : सिप सिकेर मात्र वैदेशिक रोजगारीमा जाने तपाईंको निर्णय राम्रो लाग्यो । यसले तपाईंको काम र कमाई राम्रो हुन्छ । नि:शुल्क तालिमको लागि तपाईंले एफ-स्किल भन्ने संस्थामा सम्पर्क गर्न सक्नु हुन्छ । यो संस्थाले वैदेशिक रोजगारीमा जानेलाई नि:शुल्क तालिमको व्यवस्था गरेको छ । फोन : ०१ ५५५५३०१, ५५२४६४८ इमेलः [email protected]/* */, [email protec...
कसरी विदेश गए महिला कामदार सुरक्षित हुन सक्छन् ?
प्रश्न : कसरी विदेश गए महिला कामदार सुरक्षित हुन सक्छन् ? उत्तर : मिना जी, सिप सिकेर सिधै म्यानपावर कम्पनीमार्फत विदेश जाँदा पुरुष होस् वा महिला, उनीहरुको काम र कमाई राम्रो हुन्छ । औद्योगिक क्षेत्र, होटल मजदुर, सरसफाई मजदुरको काममा नेपाली महिला कामदार पनि विदेश गइरहेका छन् । दलालको भर पर्नु हुन्न । दलालले एउटा काम भनेर अर्को काममा पठाउन सक्छन् । त्यसैले सचेत हुनुहोस । घरेलु काममा विदेश नगएको राम्रो ।
केयर गिभर तालीम दिन स्वीकृति प्राप्त संस्थाहरु कुन कुन हुन ?
प्रश्न : वैदेशिक रोजगार विभागले इजरायलको लागि केयर गिभर तालीम दिन स्वीकृति प्राप्त संस्थाहरु कुन कुन हुन र तालीम शुल्क कति लाग्छ ? उत्तर : नेपाल सरकार र इजरायल सरकार बीच भएको सम्झौतामा केयर गिभरको रुपमा इजरायलमा जानको लागि ३ महिनाको केयर गिभर सम्बन्धी तालीम लिनुपर्ने ब्यबस्था रहेको छ । तालीम लिन १६ हजार ५ सय रुपैया लाग्छ । तालीम दिन उपत्यकका १८ वटा संस्था छनौट गरिएको छ । छनौट गरिएका संस्था हेर्न यहाँ किल्क गर्नुहोस।...